QM oo sheegtay in shaqaale caafimaad looga dilay Soomaaliya - Awdinle Online
Qaramada Midoobay ayaa xaqiijisay in labo shaqaale caafimaad looga dilay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho.
War saxaafadeed uu soo saaray Sanduuqa Badbaadada Carruurta (Unicef) ayaa lagu sheegay “geesiyaasha shaqaalaha dabeysha safka hore ayay ku jireen, iyaga oo naftooda halis u geliyay inay adeegyo caafimaad ah oo muhiih ah gaarsiiyaan carruurta nugul”.
“Weerarrada ka dhanka ah shaqaalaha caafimaadka waxay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah waana inaan loo dulqaadan. Unicef waxay si xooggan u cambaareyneysaa weerarka foosha xun waxayna dowladda ugu baaqeysaa inay sameeyaan baaritaan. Shaqaalaha arrimaha bani`aadannimada waa inaan marnaba la beegsan,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Hay`adda ayaa tacsi u dirtay qoysaska shaqaalahaas geeriyooday.
Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in shaqaalaha tallaalka dabeysha lagu dilay qarax shalay ka shacay Muqdisho;
Ma jirto weli cid sheegatay weerarkaas.
Previous articleDad lagu dilay weerar ka dhacay degmada Cabudwaaq & xiisad ka taagan
Next articleGalmudug oo lacag kusoo rogtay dadka gelaya Garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb